Kooxda Juventus oo daba joogta Juninho-ha cusub! – Gool FM
(Torino) 02 Dis 2016 – Juventus ayaa sida lasoo werinayo cayrsanaysa xiddig-yaraha kooxda AS Monaco ee Gabriel Boschilia, oo lagu koofaaro ‘the new Juninho Pernambucano’.
Sida uu qorayo Calciomercato, maareeyaha ciyaaraha ee Juve ee Fabio Paratici ayaan illaawin Boschilia oo uu daawaday jeer uu 20-jirkani ka dhex muuqday xulka Brazil ee ka qayb qaatay Koobkii Adduunka ee Under-17 oo Imaaraadka ka dhacay 3 sano kahor.
Laacibkan khadka dhexe ayaa sanadkan u qarxey kooxda Monaco, iyadoo 3 ka mid ah 4 gool oo uu fasalkan ka dhaliyay Ligue 1 ay ka yimaaddeen laadad xor ah, taasoo keentay in lagu misaalo jaallihiisii Lyon ee Juninho, waxaa sidoo kale la barbardhigaa Ricky Kaka.
Juve ayaa la sheegayaa inay laacibkan xiisaynaysay sanadkii tegey, markaasoo uu weli ka tirsanaa Sao Paulo, balse AS Monaco ayaa ugu dambayntii kusoo heshay €7m oo qura.
GOOGOOSKA: FSV Mainz 05 vs Bayern Munchen 1-3